Xaldhibaan Odawaa” Xarigga iyo caga juglaynta saxaafadda waa calaamad aan u fiicneyn dowladnimada Soomaaliyeed” – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa), oo katirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa cambeerayay Xaragga Cali Aadan Muunin, oo katirsan wariyaasha Idaacadda Goob-joog ee magaalada Muqdisho.
“Waxaan cambaareynayaa xarigga loo geestay wariye Cali Aadan Muumin oo ah wariye dhalinyar kana tirsan Radio Goobjoog” ayuu yiri Xildhibaan Odawaa oo qoraal soo dhigay bartiisa facebook.
Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odawaa ayaa sheegay in xarigga iyo caga jugleynta saxaafadda ay tahay calaamad aan u wanaagsaneen dowladnimada Soomaaliya waxa uuna ku baaqay in si deg deg ah loo sii daayo.
“Xarigga iyo caga jugleynta waa calaamado aan u fiicneyn dowladnimada Soomaaliyeed” ayuu yiri Xildhibaan Cabdiraxmaan Odawaa oo katirsan Baarlamaanka Soomaaliya.
“Waxaan ugu baaqayaa hey’adaha amniga ee Xukuumadda in Cali deg deg oo siiyo Xorriyadiisa” ayuu ku soo gaba-gabeeyay qoraal kooban uu soo dhigay bartiisa facebook Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Odawaa oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Wariye Cali Aadan Muumin oo katirsan Idaacadda Goobjoog ayaa shalay looga yeeray in uu maanta 8:00 am uu yimaado xarunta dembi baarista Booliiska Soomaaliya ee CID waxaana markii uu tagay la sheegay in ay Ciidamada xireen Wariyaha oo la sheegay in ay dacwad ka soo gudbisay Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya.